Juuk inosaina Chishanu Chishanu nemabhande ayo eApple Watch | Ndinobva mac
Juuk inonyorera kuChishanu Chishanu nemabhande ayo eApple Watch
Zvese kana angangoita ese makambani ari kutora mukana wekudhonza kwevhiki (nekuti harisisiri zuva, iri vhiki) reBlack Friday nezvikwereti zvakasiyana izvo zvinogona kuve zvinonakidza kune vazhinji vashandisi vanotarisira Kisimusi kutenga Juuk aisada kusiiwa uye atove nezvipo zvake zvinyorwa.
Mupfungwa iyi, iyo Juuk yakasimba iyo yatakaona mamwe matambo mu soydemac.com ine zvakanaka zvidzoreso zvemazuva ano. Izvi zvinoderedzwa kana kudzoserwa zvinosvika pakati pe25 ne50% pane mamwe emabhande avo Saka isu tinogona kutaura kuti ndiyo nguva yekutsvaga iyo yataive nayo mundangariro uye kuzvifadza isu pachedu.
Idzi tambo dzeJuuk hapana mubvunzo kuti dzakakwirira mhando tambo maererano nezvinhu uye zvakare vane basa chairo uye rakasarudzika dhizaini. Mune imwe nyaya havadi kuita kunge Apple tambo, vane dhizaini yavo uye vane mhando yepamusoro.
Icho chokwadi ndechekuti isu tine akati wandei mamodheru anowanikwa pane iyo Juuk webhusaiti uye ese kana angangoita ese iwo ane anonakidza dhisikaundi yevhiki ino. Chinhu chakanakisa mune idzi kesi ndechekuti iwe enda wakananga pawebhu uye uone iwo mabhanhire eApple Watch ayo anogona kukunakidza. Isu tinogovana mimwe mitengo yakaderedzwa iyo unogona kuwana paJuukDesign.com:
Iyo 42 / 44mm Chiedza Obsidian (aluminium) ine 50% dhisikaundi
Iyo 42 / 44mm Yakareruka Cosmic Grey (aluminium) ine imwe 50% dhisikaundi
Iyo 38 / 40mm Vitero Ruby Grey (aluminium) modhi ine 25% dhisikaundi
Iyo 42 / 44mm Revo Brushed (simbi) 35% yabviswa
Uye mamwe mamodheru iwe aunowana pane yako peji ine inonakidza dhisikaundi yevhiki ino yeChishanu Chishanu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Juuk inonyorera kuChishanu Chishanu nemabhande ayo eApple Watch
Podcast 12 × 10: Imwe yelime uye imwe yejecha
Iyo Russo Brothers Movie Cherry Premieres yaKurume 12 paApple TV +